मुस्कानको मनोविज्ञान – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १४ आश्विन २०७७, बुधबार १६:०४
मुस्कान आफैमा भाषा हो, आफैमा भाव हो । जब हामी आनन्दित र खुसी अनुभूत गर्छौं, हाम्रो अनुहारमा शान्त एवं प्रफुल्ल भाव प्रकट हुन्छ । यतिबेला हाम्रो ओंठमा मुस्कान छाउँछ ।
तपाईंले कति ख्याल गर्नुभएको छ, जब हामी मुस्कुराउँछौं मन आनन्दित हुन्छ । शान्त हुन्छ । उमंगको लहर चल्छ । क्षणभर नै सही, रिस, कुण्ठा, भय, तनाव, वेचैनी हट्छ । त्यती मात्र कहाँ हो र ? जब तपाईं-हाम्रो अनुहारमा मुस्कान प्रकट हुन्छ, हामी उभिएको वातावरणमा खुसियली छाउँछ । आसपासमा बसेका मान्छेहरुमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।
अति सामान्य र स्वभाविक भावनात्मक स्थिति हो । तर, यसको प्रभाव गहिरो र सर्वत्र छ । जब हामी मुस्कुराउँछौं यसले हामीलाई मानसिक र शारीरिक रुपमै फाइदा गर्छ । त्यसैले त भनिएको छ, मुस्कान आफैमा एक उपचार हो । ओखति हो ।
अझ काइदाको कुरा त के भने, मुस्कुराउनका लागि हामीलाई त्यस्तो विशेष अवसर प्राप्त भइरहनुपर्दैन । न यसलाई हामीले बाहिरी श्रोतबाट ल्याउनुपर्छ । किनभने यो हामी भित्रैबाट प्रकट हुने भाव हो ।
मुस्कानको अनेक फाइदा छन् । यसले हाम्रो आत्मविश्वास अरु दरिलो बनाउँछ, मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण गर्छ । मुस्कानले हाम्रो शरीरलाई उत्तेजना र भयबाट टाढा राख्छ । खुलेर हाँस्नाले रक्तनली खुल्छ र रगत राम्रोसँग शरीरको अन्य भागमा पुग्छ । हाँसोले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बढाउँछ ।
मनोचिकित्सकहरु भन्ने गर्छन्, मानसिक स्थितीलाई सही राख्न मुस्कानले थेरापीको काम गर्छ ।
तर, कस्तो मुस्कान ?
तर, केही मानिसहरुको लागि मुस्कुराउनु सजिलो हुँदैन । उनीहरुलाई मुस्कुराउन आँउदैन भन्ने त हुँदैन तर उनीहरु गम्भिर माहौलमा हुर्केबढेका हुन्छन् र उनीहरुलाई सानैदेखि गम्भिर बन्न जोड दिइन्छ । यस्तोमा उनीहरु मनमा प्रेम हुँदाहुँदै पनि मुस्कुराएर कुरा गर्न पाँउदैनन् ।
खुसी रहनको लागि तपाईं यस्ता मानिसको सम्पर्कमा रहनुहोस् जो हंसमुख होउन् । कसैसँग लडाई झगडा गर्नबाट बच्नुहोस् ।
सकरात्मक सोच राख्नुहोस् यसले तनाव टाढा भगाउँछ ।
आफ्नो परिवार वा मिल्ने साथीहरुसँग कँही घुम्न जानुहोस् । यसले आनन्द र उर्जावान महसुस हुन्छ ।